बबरमहलमा स्कुटरको ठक्करबाट साइकल यात्रुको मृत्यु | जनदिशा
बबरमहलमा स्कुटरको ठक्करबाट साइकल यात्रुको मृत्यु
janadisha July 22, 2018	No Comments
काठमाडौं । काठमाडौँको बबरमहलमा स्कुटरको ठक्करबाट साइकल यात्रुको मृत्यु भएको छ । गएराति ११ः४५ बजे बा ७२ प ५०३८ नम्बरको स्कुटरले ठक्कर दिँदा रामेछाप घर भई भक्तपुरको ठिमी बस्ने २४ वर्षीय हीराबहादुर थानीको मृत्यु भएको हो ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद मैनालीले दुर्घटनाबाट घाइते थानीको उपचारका क्रममा राति १ः३० बजे अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा निधन भएको जानकारी दिनुभयो ।
स्कुटरमा सवार रहेका दुई जना पनि घाइते भएकाले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा उपचार भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । साइकललाई ठक्कर दिएको स्कुटरसमेत नियन्त्रण गुमाएर पल्टिएको थियो ।
Previous Previous post: रुस र युरोपका विभिन्न देशहरुको भ्रमणमा संयोजक डा. भट्टराई, यस्तो छ कार्यक्रमहरु !
Next Next post: ‘भारतको राजस्थानमा पहिलो पटक बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय सुनाइयो’